Olee otú iji weghachi iPhone, iPad, na iPod aka metụ iCloud ndabere
> Resource> iCloud> Olee otú iji weghachi iPhone, iPad, na iPod si iCloud ndabere
Mgbe ị zụrụ a ọhụrụ iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod, i nwere ike mkpa iji weghachi data si iCloud ndabere iji nweta ihe niile azụ ngwaọrụ gị. Nke a ụzọ na-arụ ọrụ kwa mgbe ị tọgharịa gị iOS ngwaọrụ dị ka onye ọhụrụ. Yeah, weghachi iOS ngwaọrụ site iCloud ndabere dị nnọọ mfe (dị ka ndị na-esonụ na-egosi). Otú ọ dị, e nwere ihe ọzọ ọnọdụ. Mgbe ị na-gị mkpa data furu efu na gị iOS ngwaọrụ, ma ị na-ahụ na ị dị nnọọ ike abụghị nanị weghachi gị iOS ngwaọrụ site iCloud, n'ihi na ụfọdụ data na ngwaọrụ ugbu a dị mkpa kwa. Na nke a, ị kwesịrị ị na selectively weghachi gị iOS si iCloud ndabere. Ịhọrọ ụzọ ziri ezi iji weghachi iOS ngwaọrụ site iCloud ndabere na nke ahụ bụ uwe gị.
Way 1. Weghachi si iCloud Backcup (dochie niile ugbu a data na data si iCloud ndabere)
Way 2. selectively Weghachi si iCloud ndabere (bulie họrọ data, ọ dịghị mkpa ihichapu iPhone / iPad / iPod)
Mkpa: otú a iji weghachi iPhone, iPad, iPod si iCloud ndabere ga-akwụsị niile ugbu a data na ngwaọrụ gị. Ya mere, tupu na-ala ọrụ, ndabere gị niile dị mkpa data, ma na iCloud ma ọ bụ iTunes.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iOS ngwaọrụ a anụ netwọk. A anụ netwọk ga-eme ka weghachi-aga na were were. N'oge dum usoro weghachi ndabere si iCloud, biko Akwụpụla gị iOS ngwaọrụ netwọk. Ma, ị ga-ada iji weghachi si iCloud ndabere.
Nzọụkwụ 2. Gaa Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia, họrọ Ihichapu ọdịnaya niile & Ntọala na ngwaọrụ gị. Ọ ga-ewe gị a nkeji ole na ole ihichapu niile data na gị iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod. Dị nnọọ ndidi.
Nzọụkwụ 3. Na Mbido nnyemaaka, enweta nhọrọ Weghachi si iCloud ndabere. Banye iCloud na gị Apple ID. Na mgbe ahụ na-ahọrọ nri iCloud ndabere faịlụ na enweta Weghachi n'elu.
Selectively weghachi si iCloud ndabere adịghị achọ ka ị na-ebu usoro na gị iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod. Ị dị nnọọ mkpa rụchaa usoro na kọmputa gị, Windows PC ma ọ bụ Mac. The software anyị na-aga iji bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery maka Windows) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery for Mac OS X). Ọ ga-enyere gị weghachi gị iOS ngwaọrụ site iCloud ndabere na data ị chọrọ.
Flexibly Weghachi iPhone / iPad / iPod si iCloud ndabere
Ị nwere ike iweghachi ihe ọ bụla ị chọrọ n'aka iCloud ndabere ka iPhone, iPad na iPod aka!
Wepụ iCloud ndabere maka preview na mgbake, na otu maka iTunes ndabere.
Kpọmkwem iṅomi gị iPhone naghachi furu efu data site na ya.
Ka mgbake, ị nwere ike họrọ ihe ọ bụla ihe ị chọrọ mgbe Michael.
Dakọtara na iOS 9, iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS na ihe niile iPads.
Eme ka i nwee ahụ data furu efu ruru iche iche ihe na dị ka nhichapụ, resetting, iOS nweta nkwalite ọdịda, wdg
Nzọụkwụ 1 Gbaa ndị omume na banye na gị iCloud akaụntụ
Mgbe wụnye usoro ihe omume, na-agba ya na kọmputa gị. Mgbe ahọrọ mgbake mode nke naputa site na iCloud ndabere. Ị na-ahụ window n'okpuru (Lee na-Windows version dị ka ihe atụ). Ugbu a banye na gị iCloud akaụntụ site na itinye Apple ID na paswọọdụ.
Cheta na: Ihe omume ga BỤGHỊ na-ozi ọ bụla nke gị na iCloud akaụntụ. Dị nnọọ ka uche gị dịrị ala.
Nzọụkwụ 2 Download ma wepụ gị iCloud ndabere
Ozugbo ị ite ke, usoro ihe omume ga-akpaghị aka chọta nkwado ndabere na mpaghara faịlụ gị iCloud akaụntụ. Họrọ onye na ị chọrọ iji weghachi data site na pịa na Download button n'okpuru menu nke State. Na mgbe ahụ na mmapụta, họrọ data na ị chọrọ iji weghachi ngwaọrụ gị. Ọ na-ewe ogologo oge ibudata dum iCloud ndabere faịlụ. Site ịhọrọ data ibudata, ọ ga-obere na download usoro. Mgbe ọ bụ zuru ezu, Pịa na otu button na-amalite adịrị ya, na ị ga-ahụ na windo dị ka ndị a.
Download Wondershare Dr.Fone maka iOS ikpe mbipute n'okpuru nwere a na-agbalị ugbu a!
Nzọụkwụ 3 Preview na weghachite si iCloud ndabere
N'oge Doppler, ị nwere ike na-amalite Michael data dị na gị iCloud ndabere. E nwere photos, videos, ozi, kọntaktị, ndetu, wdg Ọtụtụ n'ime ha dị ka ịhụchalụ. Ị nwere ike tinye akà rà ihe ọ bụla ihe ị chọrọ ma weghachi ha niile gị na kọmputa na otu oge ke akpatre. Mgbe e mesịrị, i nwere ike ịgbalị software, dị ka Wondershare TunesGo, idetuo kọntaktị, foto, videos, songs, na ndị ọzọ site na kọmputa gị ka gị na iPhone, iPad, na iPod
Olee otú naghachi faịlụ site iCloud
Olee otú Naghachi Notes si iCloud ndabere